Macluumaadka Tallaalka COVID-19 - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha Macluumaadka Tallaalka COVID-19 - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha
Warbixin ku saabsan cudurka COVID-19 Isbaanish
Moderna, Pfizer, ama Johnson & Johnson tallaalada ayaa diyaar u ah qiyaasaha koowaad, labaad, saddexaad, ama xoojinta, taas oo ku xidhan baahiyahaaga caafimaad.
Waxaan tallaalaynaa carruurta (5 sano+), dhallinta, iyo dadka waaweyn - xataa haddii aanad bukaan ahayn.
Waxaan tallaalaynaa carruurta (6 bilood - 5 sano) kuwaas oo ah bukaannada Ururka oo keliya.
Wac 717-299-6371 si aad ballan u qabsato ama aad wax uga weydiiso saacadaha tallaalkayaga oo la galo mid ka mid ah xarumaheenna. Bukaannada hadda jira waxay codsan karaan inay jadwalaan tallaalkooda koowaad khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya Maqalka bukaanka.
Waxyeellooyinka tallaalka COVID-19 iyo xaqiiqooyinka:
Tallaalka ka dib, waxaa laga yaabaa inaad yeelato qaar ka mid ah waxyeelada hargabka oo kale ah. Tani macnaheedu maaha inaad jirran tahay - waa calaamad muujinaysa in jidhkaagu uu dhisayo ilaalinta oo uu diyaar u yahay inuu la dagaallamo fayraska!
Dadka qaarkiis waxay dareemaan saameyno-daaweedyo xooggan kadib qiyaastooda 2aad ama qiyaasta xoojinta. Daawooyinka xanuunka fududeeya ee aan farmashiyaha laga iibsan ayaa kaa caawin kara waxyeelooyinkan. Dadka intooda badan waxay dareemaan farxad, caafimaad, iyo sidii caadiga ahayd 24-48 saacadood ka dib!
Tallaalku waxa uu kaa caawin doonaa in uu idinka ilaaliyo adiga iyo dadka aad jeceshahay jirro halis ah, isbitaal dhigid ama dhimasho.
Tallaalku ku siin maayo COVID-19 ama kaa dhigi maayo inaad iska baadho COVID-19.
Tallaalku ma beddeli doono DNA-gaaga, laguma xidhiidhin dhalmo-la'aan ama dhicis, mana laha maaddooyin khatar ah, unugyo uurjiif ah, ukun, ama waxyaalaha ilaaliya.
Dadka horey u lahaa COVID-19 weli way ka faa'iideysan doonaan qaadashada tallaalka maadaama aan aragno noocyo badan oo COVID-19 ah.
Durba ma heshay tallaalkaaga? U sheeg qoyskaaga, asxaabtaada, iyo deriskaaga inay badbaado tahay oo ay shaqaynayso! Wali ma hubtid? Kala hadal bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah tallaalka iyo haddii ay kugu habboon tahay.
Waxtarka tallaalka: Tallaallada Moderna & Pfizer waxay ka shaqeeyaan inay kaa ilaaliyaan inaad aad uga bukooto COVID-19 laba toddobaad ka dib markaad qaadatay qiyaastaada 2aad ama xoojinta. Tan ugu muhiimsan, labadooduba waxay ka shaqeeyaan inay kaa ilaaliyaan isbitaal dhigis daran ama dhimasho.
Waxtarka tallaalka: Tallaalka Janssen wuxuu u shaqeeyaa inuu kaa ilaaliyo inaad aad uga bukooto COVID-19 laba toddobaad ka dib markaad qaadatay qiyaasta 1aad ama xoojintaada. Tan ugu muhiimsan, sida Moderna & Pfizer, waxay u shaqeysaa inay kaa ilaaliso cusbitaalka daran ama dhimashada.
Tijaabooyinka tallaalka: Tijaabooyinka tallaalka Janssen waxaa ka mid ahaa kaqeybgalayaal kala duwan kuwaas oo loo aqoonsaday inay yihiin Hisbaanik/Laatiin iyo Madow ama Afrikaan Ameerikaan ah. Waxa kale oo ka mid ahaa ka qaybgalayaal badan oo ka weyn 60 jir iyo in ka badan oo lahaa in ka badan hal xaalad caafimaad. Tijaabooyin ayaa sidoo kale lagu sameeyay goobo ay jiraan qaar ka mid ah noocyada cusub ee wareegaya, waxaana wali laga shaqeeyay si looga hortago in isbitaal la dhigo iyo dhimasho daran!